October 3, 2021 - ApannPyay Media
ကွယ်လွန်တာ(၃)နှစ်ပြည့်ပေမယ့် ညီဖြစ်သူမင်းသွေးကို ခုချိန်ထိမမေ့နိုင်သေးတဲ့ နေတိုး
October 3, 2021 by ApannPyay Media
ကွယ်လွန်တာ(၃)နှစ်ပြည့်ပေမယ့် ညီဖြစ်သူမင်းသွေးကို ခုချိန်ထိမမေ့နိုင်သေးတဲ့ နေတိုး သရုပ်ဆောင်နေတိုးရဲ့ညီအရင်းဖြစ်တဲ့မင်းသွေးကတော့အနုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့ပေမယ့်အရွယ်မတိုင်ဘဲကြွေလွှင့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အချစ်ကို သိမ်းပိုက်ထားခံရတဲ့ ကိုမင်းသွေးဟာ အောက်တိုဘာ ၃ရက်နေ့၂၀၁၈ခုနှစ်မှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခြင်းဟာပရိတ်သတ်တွေအတွက်ရော၊အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှာပါအံ့သြသွားစေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့နဲ့ဆိုသရုပ်ဆောင်မင်းသွေးကွယ်လွန်သွားတာ(၃)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဘဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကွယ်လွန်ခင်မှာသရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့ မုန်းစွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊သတ်ကွင်းရုပ်ရှင်တို့ဟာ တော်တော်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူကတော့ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရုံတင်ပြသချိန်မှာတော့ သူဟာ ရှိမနေခဲ့တော့ပါဘူး။ သရုပ်ဆောင်နေတိုးရဲ့ညီအရင်းဖြစ်တဲ့မင်းသွေးကတော့အနုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့ပေမယ့်အရွယ်မတိုင်ဘဲကြွေလွှင့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အချစ်ကို သိမ်းပိုက်ထားခံရတဲ့ ကိုမင်းသွေးဟာ အောက်တိုဘာ ၃ရက်နေ့၂၀၁၈ခုနှစ်မှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခြင်းဟာပရိတ်သတ်တွေအတွက်ရော၊အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှာပါအံ့သြသွားစေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့နဲ့ဆိုသရုပ်ဆောင်မင်းသွေးကွယ်လွန်သွားတာ(၃)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဘဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကွယ်လွန်ခင်မှာသရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့ မုန်းစွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊သတ်ကွင်းရုပ်ရှင်တို့ဟာ တော်တော်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူကတော့ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရုံတင်ပြသချိန်မှာတော့ သူဟာ ရှိမနေခဲ့တော့ပါဘူး။ Credit ကြယ္လြန္တာ(၃)ႏွစ္ျပည့္ေပမယ့္ ညီျဖစ္သူမင္းေသြးကို ခုခ်ိန္ထိမေမ့ႏိုင္ေသးတဲ့ ေနတိုး သ႐ုပ္ေဆာင္ေနတိုးရဲ႕ညီအရင္းျဖစ္တဲ့မင္းေသြးကေတာ့အႏုပညာနယ္ပယ္မွာေအာင္ျမင္မႈေတြမ်ားစြာရရွိခဲ့ေပမယ့္အ႐ြယ္မတိုင္ဘဲေႂကြလႊင့္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူေတြရဲ႕အခ်စ္ကို သိမ္းပိုက္ထားခံရတဲ့ ကိုမင္းေသြးဟာ ေအာက္တိုဘာ ၃ရက္ေန႔၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားျခင္းဟာပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ေရာ၊အႏုပညာအသိုင္းအဝိုင္းမွာပါအံ့ၾသသြားေစခဲ့ပါတယ္။တစ္ဆက္တည္းမွာပဲဝမ္းနည္းေၾကကြဲခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေန႔နဲ႔ဆိုသ႐ုပ္ေဆာင္မင္းေသြးကြယ္လြန္သြားတာ(၃)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီဘဲျဖစ္ပါတယ္။သူမကြယ္လြန္ခင္မွာသ႐ုပ္ေဆာင္ထားခဲ့တဲ့ မုန္းစြဲ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၊သတ္ကြင္း႐ုပ္ရွင္တို႔ဟာ ေတာ္ေတာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ သူကေတာ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး႐ုံတင္ျပသခ်ိန္မွာေတာ့ သူဟာ ရွိမေနခဲ့ေတာ့ပါဘူး။ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနတိုးရဲ႕ညီအရင္းျဖစ္တဲ့မင္းေသြးကေတာ့အႏုပညာနယ္ပယ္မွာေအာင္ျမင္မႈေတြမ်ားစြာရရွိခဲ့ေပမယ့္အ႐ြယ္မတိုင္ဘဲေႂကြလႊင့္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူေတြရဲ႕အခ်စ္ကို သိမ္းပိုက္ထားခံရတဲ့ ကိုမင္းေသြးဟာ ေအာက္တိုဘာ ၃ရက္ေန႔၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားျခင္းဟာပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ေရာ၊အႏုပညာအသိုင္းအဝိုင္းမွာပါအံ့ၾသသြားေစခဲ့ပါတယ္။တစ္ဆက္တည္းမွာပဲဝမ္းနည္းေၾကကြဲခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေန႔နဲ႔ဆိုသ႐ုပ္ေဆာင္မင္းေသြးကြယ္လြန္သြားတာ(၃)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီဘဲျဖစ္ပါတယ္။သူမကြယ္လြန္ခင္မွာသ႐ုပ္ေဆာင္ထားခဲ့တဲ့ … Read more
ရုတ်တရက် ကျန်းမာရေးဆိုးဝါးလာလို့ ဆေးရုံတတ်နေရတဲ့ မြညို ခေါ် မြတ်သူသူ
ရုတ်တရက် ကျန်းမာရေးဆိုးဝါးလာလို့ ဆေးရုံတတ်နေရတဲ့ မြညို ခေါ် မြတ်သူသူ MRTV-4 မင်းသမီးမြတ်သူသူဇင်ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေတစ်ဆင့်အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစတင်ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးခြင်းကိုရရှိထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မြတ်သူသူဇင်က သီချင်းစီးရီးခွေကိုလည်း ထုတ်လုပ်ထားပြီး အနုပညာနယ်ပယ်ကိုခြေ ဆန့်လာနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ မိသားစုကိစ္စလေးတွေကြောင့်အထီးကျန်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေထားခဲ့ပါသေးတယ်။ မြတ်သူသူဇင်ကတော့လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာလုံးဝမပါဝင်ခဲ့လို့ပရိသတ်တွေရဲ့ပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခြင်းကိုခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ချစ်သူရှိနေပေမဲ့ချစ်သူကိုထုတ်မပြဘဲ အနေအထိုင်သိုသိပ်လှသူဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ကာလမှာတုန်းကတော့ မြတ်သူသူက ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် စပရိုက်အကြီးကြီးတိုက်တာကို ခံခဲ့ရတာကြောင့် မိန်းကလေးတွေရဲ့အားကျခြင်းကို ခံခဲ့ရသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်သူသူကတော့လက်ရှိ MRTV_4 မှာပြန်လည်ပြသနေတဲ့ ပျားရည်အိုင် ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ယောက်ကျာ်းရဲ့ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ မြညိုနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်မြတ်သူသူဇင်ကကျန်မာရေးအခြေအနေဆိုးရွားနေလို့အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောကြားလာပါတယ်နော်။ မြတ်သူသူဇင်ကျန်မာရေးအခြေအနေဆိုးရွားနေလို့အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့FacebookPageStoryမှာဆေးရုံတက်နေတဲ့အကြောင်းကိုပုံရိပ်နှင့်တကွဖော်ပြထားပါတယ်၊ Weekly Myanmar ပရိသတ်ကြီးလည်း မြညိကို အားပေးကြပါအုံးနော်… Source: Myat Thu Thu -မြတ်သူသူ ႐ုတ္တရက္ … Read more
မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုး ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်မလဲ
မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုး ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်မလဲ မြန်မာပြည်သူတိုင်းရဲ့ လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ကျပ်ငွေ တန်ဖိုးတွေဟာ အရမ်း နှမျောဖို့ ကောင်းပါတယ်။ လုပ်အားတန်ဖိုး၊ အချိန် တွေ အများကြီး ဆုံးရှုံးရတာပါ။ တချို့လူတွေ တသောင်းတန် တရွက်ရဖို့ ချွေးတလုံးလုံး၊ မနက်မိုးလင်းမှ မိုးချုပ်ထိ လှုပ်ရှားရတာ၊ ကိုယ်က ဘာမှ မလုပ်လိုက်ရပဲ အရင်နေ့တွေမှာရှိနေတဲ့ တသောင်းတန်က ငါးထောင်တန်လောက်ပဲ တန်ဖိုးရှိတော့တယ်။ ကိုယ်လုပ်ပြီး ကိုယ်မစားရတဲ့ ဘဝ တွေအများကြီး။ တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ credit ကျသွားရင် ငွေတန်ဖိုးပါမကတော့ဘူး၊ အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ၊ လုပ်အားတန်ဖိုးတွေပါ ကျသွားတာ။ ဘယ်ကလဲ လို့ အမေးခံရရင် မြန်မာပြည်က လို့ ပြောမိတာနဲ့ အလိုလို အထင်သေးခံရ၊ လုပ်အားဈေးနှိမ်ခံရတာတွေဟာ အားလုံး ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ နာဂစ်ဖြစ်တုန်း … Read more
လူတွေအမက်များတဲ့ အိပ်မက်အချို့ရဲ့နောက်ကွယ်က အဓိပ္ပာယ်များ
လူတွေအမက်များတဲ့ အိပ်မက်အချို့ရဲ့နောက်ကွယ်က အဓိပ္ပာယ်များ ရှေးတုန်းကတော့ အိမ်မက်တွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုသိဖို့အတွက် ရှေ့ဖြစ်ဟောတဲ့ ဗေဒင်ဆရာတွေဆီမှာ သွားမေးကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ (၂၁)ရာစုခေတ်ကြီးထဲမှာတော့ စိတ်ပညာရှင်တွေ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တွေ ရှိနေပြီဖြစ်လို့ အိပ်မက်တွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေအပြင် ဘာကြောင့် ဘယ်လိုအိပ်မက်တွေ မက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သိနိုင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖေါ်ပြမယ့် အိပ်မက် အဓိပ္ပါယ်တွေကတော့ အတိအကျကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ မှန်ကန်မှုရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ ၁။ နောက်က အလိုက်ခံရတယ်” ဒီ အိပ်မက်မျိုးကတော့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ အရမ်းရှိတဲ့အခါမှာ မက်တတ်ပါတယ်။ လူအများစုကတော့ ဒီအိပ်မက်မျိုးမက်ဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ် အကြာကြီးစိုးရိမ်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ရမယ့် အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာ မက်တတ်ပါတယ် …။ ၂။ သွားကျိုးတယ်” သွားက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ ယုံကြည်မှုကို ကိုယ်စားပြုတာဖြစ်ပြီး … Read more
ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး ကံကောင်းစေတဲ့ မှဲ့ (၈)မျိုး
ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး ကံကောင်းစေတဲ့ မှဲ့ (၈)မျိုး နှုတ်ခမ်းအပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့မှဲ့ အရမ်းကို ကောင်းတဲ့မှဲ့တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရွယ်တူတန်းတူတွေထက် ငွေကြေး၊ အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိတတ်တဲ့မှဲ့လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှဲ့ပိုင်ရှင်တွေက ခေါင်းနည်းနည်းမာတဲ့ သဘာဝရှိပေမဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ် အရမ်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်တတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့ နှာခေါင်းရဲ့ တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာ မှဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင် သေချာပေါက်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ငွေကြေးနှစ်ခုစလုံးက အသက် ၃၀ နောက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ရရှိတတ်ပါတယ်။ ညာဘက်ပါးပြင်ပေါ်ကမှဲ့ ညာဘက်ပါးပေါ်မှာ ထင်ရှားပြီး ပြတ်သားတိကျတဲ့ မှဲ့တစ်လုံးရှိမယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက်မှာ အရမ်းကို ချမ်းသာကြွယ်ဝလာမယ်လို့ သိနိုင်ပါတယ်။ မျက်ခုံး/မျက်လုံးနှစ်ခုကြားကမှဲ့ မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်လုံးနှစ်လုံးကြားမှာဖြစ်ဖြစ် မှဲ့တစ်လုံး ရှိမယ်ဆိုရင် ချမ်းသာပြီး ဘဝတစ်ခုကို သာသာယာယာနဲ့ အခြေချနိုင်မယ့် သူတစ်ဦးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘဝမှာ တောင့်တစရာမလိုဘဲ … Read more
ဒီလိုမိန်းမမျိုးရှားတယ်ဆိုပြီး မင်းမော်ကွန်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကို ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦး
ဒီလိုမိန်းမမျိုးရှားတယ်ဆိုပြီး မင်းမော်ကွန်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကို ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အခုတစ်ခါမှာ ဆိုရင်တော့ ပရိတ်သတ်တွေထဲက တစ်ဦးက သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီး အခုလို ချီးကျူးစကား ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။ ဘာမှမမြင်ဘူး မင်းမော်ကွန်းမိန်းမပဲ မြင်တယ် တစ်ကယ်အား ကျတယ် ဆယ်တန်းအောင်ပြီး နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်ခါနီးခိုးမယ်ဆိုတော့လဲ နိုင်ငံခြားမသွားဘဲ ခိုးရာလိုက်တယ် ယော က်ျားက တော်ရုံပွဲလူရှုပ်လို့ဆိုပြီး ငါမင်းသားမိနးမဆိုပြီး လိုက်မနေဘူး နောက်ပိုင်းမှ မင်းမော်ကွန်းမိန်းမဆိုတာကို မြင်ရတာ။ ဒါတောင် သူကသိပ်ပြီးဟိုဟာလုပ် ဒီဟာလုပ်လိုက် ပြောလေ့မရှိဘူး အခုလဲ အောင်မြင်နေတာ ပိုက်ဆံကော နာမည်ကော ကျော်ကြားမှုကောကို ပစ်ပြီး တောခိုမယ်ဆိုတော့လဲ အကိုရယ်မိသားစုရှေ့ရေးတို့ သားသမီးတွေရှိတယ်လေတို့ ငွေတွေ ကိစ္စတို့ တစ်ခွန်းမပြောဘူး။ တစ်ကိုယ်ကောင်းသမား ကျွန်မတို့တော့ မလိုက်နိုင်ဘူး တစ်ခွန်းမပြောဘူး။ သားသမီးတွေ မွေးထားပြီး … Read more
မျက်နှာသစ်ပြီးမှ သွားတိုက်ပါ သင် နံနက်အိပ်ယာထတဲ့အခါ မျက်နှာသစ်ပြီးမှ သွားတိုက်ပါသလား???ဒါမှမဟုတ် သွားကို သွားပွတ်တံနဲ့အရင်တိုက်ပြီး ပလုတ်ကျင်း၊ ခံတွင်းသန် ့စင်ပြီးမှ မျက်နှာသစ်လေ့ရှိသလား။ ဒီလို အကျင့်လုပ်ခဲ့တာကောနှစ်ပေါင်းကြာပြီလား??? ညအိပ်ပျော်သောအခါတွင် ဝမ်းတွင်းအစာခြေ အင်္ဂါစုများမှာ အနားရလေသည်။ထိုအခါ အစာဟောင်းအိမ်မှ အပုပ်အခိုးများသည် အကြောများမှတဆင့် အထက်မျက်နှာ၊ မျက်စိ၊ ဦးခေါင်း အထိ တက်ကြလေသည်။ အစာသစ်အိမ်မှလည်း အစာခြေပြီး ကြွင်းကျန်သည့် အစာခြေဝမ်းမီးခေါ် အက်ဆစ်အခိုးအငွေ ့များသည် လည်ချောင်းမှတဆင့် သွား၊ သွားဖုံး၊ အာခေါင်များသို့တက်နေကြလေသည်။ နံနက်ထ၍ မျက်နှာသစ်လိုက်သောအခါတွင် အောင်းနေသော အခိုးအငွေ ့များသည် အအေးရှိရာ အပူလာသည်ဆိုသည့်အတိုင်း ရေအေးနှင့် ထိတွေ ့ပွတ်သပ်ပေးရာ မျက်နှာပြင်သို့အငွေ ့ပျံပြီး ထွက်သွားကြလေသည်။ … Read more
ထမင်းသုတ်ရောင်းရာမှ သတင်းထောက်ဖြစ်လာသူသဇင်ဦးအကြောင်း ကျောက်ဆည်သားတစ်ဦး၏ဖွင့်ဟချက်(ရုပ်/သံ) ထမင်းသုတ်ရောင်းရာမှ သတင်းထောက် ဖြစ်လာသူ သဇင်ဦး အကြောင်း ကျောက်ဆည်သား တစ်ဦး၏ဖွင့်ဟချက် အမှန်အကန် သတင်းဌာနတွေ ဖိတ်ခေါ်လို့မရတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ ာငါတို့ကျောက်ဆည်က ထမင်းသည်တောင် သတင်းထောက် ဖြစ်သွားပြီ ဒါ ဟာ ငြင်းလို့မရတဲ့ သမိုင်းဝင် လိမ်ညာမှု တွေ ပဲ နိုင်ငံတော်အဆင့် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲက ဒီလောက်ကြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် သတင်းထောက် အတုတွေ ထည့်ရဲတာဟာ နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံ မညံ့တော့တဲ့ ပြည်သူတွေကို ဂျင်းထည့်တာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး! ဒါ အောက်ခြေစစ် တပ်အသိုင်းအဝိုင်းကို လိမ်နေတာပဲ ဖြစ်တယ် ဘယ်ပြည်သူမှမကြည့်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ် ထပ် ဖြန့်ပြီးကိုယ့် အရှက်ကို ကိုယ်ခွဲ ကြတာပဲ သဇင်ဦး ဆိုတာ ကြံ့ဖွတ် ပါတီဝင် … Read more
စိတ်ပူနေတဲ့ သူရဲ့ပရိသတ်ကိုတော့ မရရအောင်ထောင်ထဲကနေ စာလေးတစ်စောင် ရေးပေးခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန် တံခွန်ကတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေကို ဘေးချိတ်ထားပြီး လူငယ်ပီပီ တိုင်းပြည်အရေးကို တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ခုဆိုရင် ပုဒ်မ (၅၀၅-က) နဲ့ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ချစ်ရတဲ့ မိသားစုနဲ့ ပရိသတ်တွေ မိတ်ဆွေတွေ က အခြားလူတွေလိုပဲ ပိုင်တံခွန် လွတ်မြောက်လာဖို့ကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ မျှော်လင့်နေကြတာ ယနေ့ အထိပါပဲ ။ ဒါ့အပြင် ခုချိန် အထိလည်း တံခွန်အတွက် ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေက ဆုတောင်းပေးခြင်းတွေ အလှူလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးနေကြပါတယ် ။ သူတစ်ပါးအပေါ် အမြဲ အလေးထားပြီး ကူညီဖေးမတတ်တဲ့ တံခွန်က အခုလည်း … Read more
နေပူကြဲကြဲမွာ သင်္ကြန်စာလွည့်ရောင်းနေတဲ့ အသက် ၇၀ အဖိုးအို
နေပူကြဲကြဲမွာ သင်္ကြန်စာလွည့်ရောင်းနေတဲ့ အသက် ၇၀ အဖိုးအို အလှူရွင် – ONE TO ONE ကေလးလူနာကူညီရေး ကိုဝမ်း (စိုင်းနေမြိုးမောင်မောင်) 09765765179 ၊ မန္တေလးမြို့ နေပူကြဲကြဲမွာ သင်္ကြန်စာလွည့်ရောင်းနေတဲ့ အသက် ၇၀ အဖိုးအို အလှူရွင် – ONE TO ONE ကေလးလူနာကူညီရေး ကိုဝမ်း (စိုင်းနေမြိုးမောင်မောင်) 09765765179 ၊ မန္တေလးမြို့ နေပူကြဲကြဲမွာ သင်္ကြန်စာလွည့်ရောင်းနေတဲ့ အသက် ၇၀ အဖိုးအို အလှူရွင် – ONE TO ONE ကေလးလူနာကူညီရေး ကိုဝမ်း (စိုင်းနေမြိုးမောင်မောင်) 09765765179 ၊ မန္တေလးမြို့ နေပူကြဲကြဲမွာ သင်္ကြန်စာလွည့်ရောင်းနေတဲ့ အသက် ၇၀ အဖိုးအို အလှူရွင် – … Read more
Categories KNOWLEDGE, MM-NEWS